Nyanzvi yechiremba wako
Mibvunzo inowanzoitika: Rheumatoid arthritis inoitika pamativi ese?
Sezvo chirwere ichi chinokura, zviratidzo zvinowanzopararira kusvika pamaoko, mabvi, makumbo, magokora, chiuno nemapfudzi. Muzviitiko zvakawanda, zviratidzo zvinoitika muzvibatanidzwa zvakafanana kumativi ese…
Mhinduro yakanyanya kunaka: Unodzivirira sei nzara iri mukati kukwira?
Vanokwira vanowana zvigunwe zvemukati? Shangu dzinokwira matombo dzakagadzirirwa kukwana zvakanaka, ndipo panomuka dambudziko. Paunoisa tsoka yako mubhutsu iyo…
Iyo pombi yemuzongoza inowanzotora nguva yakareba sei?
Inguva yakareba sei iyo lumbar puncture inotora? Lumbar puncture inotora maminetsi makumi matatu kusvika makumi mashanu, asi iwe unofanirwa kugara wakarara pasi kuchipatara kwe…
Mibvunzo inowanzoitika: Unogona kuiswa pasi peanesthesia yepombi yemuzongoza?
Anesthetic yemuno inojowa muzasi kwako kumashure kuti ubvise nzvimbo yekubaya tsono isati yaiswa. Anesthetic yemuno inoruma kwenguva pfupi sezvainojowa….
Mubvunzo wako: Kune rubatsiro rwemari here kune vanhu vane arthritis?
Patient Access Network Foundation inopa rutsigiro rwemari kune vanhu vane RA, yakafukidzwa neMedicare, avo vanoda rubatsiro kubhadharira kunze-kwehomwe mari inoenderana neyegumi-inotenderwa FDA-inogadzirisa marapirwo ekurapa….
Iko kupisa kwakaomarara kwakanaka kwerheumatoid arthritis?
Kupisa kwakanyorovera, senge mabhati anopisa, kunogona kubatsira mukupinda kwekupisa mukati memhasuru uye kunogona kupa zororo rinorwadza. Anopa hutano anogona kukurudzira kuoma…
Chii chinokonzera chisingaperi osteomyelitis?
Kazhinji zviitiko zve osteomyelitis zvinokonzerwa ne staphylococcus bacteria, mhando dzehutachiona hunowanzo kuwanikwa paganda kana mumhino dzevanhu vane hutano. Utachiona hunogona kupinda…
Kazhinji mibvunzo: Ndeipi sisitimu inodzivirira uropi uye musana?
Meninges membranes inofukidza uye inodzivirira uropi uye musana. Kune matatu akaturikidzana emanyoka: Dura mater, iri padyo nepfupa. Arachnoid, iyo…
Chii chinoitika kana iwe usina tendon?
Kana ikasarapwa, pakupedzisira inogona kukonzeresa kune mamwe tsoka uye gumbo matambudziko, senge kuzvimba uye kurwadziwa mumisungo iri pasi petsoka dzako (plantar…
Maminitsi mangani paundi paunobika nyama yenguruve muchiuno?
Ndini ndinofanira kubika nyama yangu yenguruve nyoro kana nyama yenguruve yakagochwa? Iwo mutemo wechigunwe chenguruve inogocha ndeye kuvabikira maminetsi makumi maviri nemashanu paundi yenyama…
Mhoro, zita rangu ndinonzi Maria. Mune blog yangu ndinogovana zvinyorwa zvinonakidza nezve basa rangu - ndiri chiremba wemapfupa.
Mubvunzo: PRP inogona kurapa arthritis here?
Chii chaunonzwa kana uine osteoporosis?
Mubvunzo wako: Chii chinoitika kana ndikafamba zvakanyanya mushure mekutsiva hudyu?
Mubvunzo: Chii chinonzi septic arthritis kuita kumuviri?
Unogona here kupfeka bhutsu yemombe ine gumbo rekugadzira?
Inogona UTI kukonzera osteomyelitis?
Mubvunzo wako: Ashwagandha yakanaka kune osteoarthritis?
© 2021 Podiatrist wako